झिनो अंकले घट्यो नेप्से, सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने बढ्यो - Kohalpur Trends
झिनो अंकले घट्यो नेप्से, सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने बढ्यो
२५ चैत, काठमाडौं । बुधबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अंकले घटेको छ । ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स भने केही सुधार देखिएको छ । नेप्से परिसूचक २ दशमलव ८५ अंकले घटेर २ हजार ६ सय ७१ दशमलव ६१ अंकमा आइपुगेको छ भने सेन्सेटिभ इन्डेक्स ०.६२ अंकले बढेर ४ सय ७६ दशमलव ८० अंकमा रोकिएको छ ।
हेर्नुस् कुन कम्पनीले कमाए ? कुनले गुमाए ?
Previous Previous post: प्रेमीसँग होटलमा थिइन् श्रीमती, अचानक श्रीमान अगाडि आएपछि…
Next Next post: ताप्लेजुङमा ४२४ भूमिहीनको निवेदन प्राप्त